Quality Control - Dongguan Ruizheng Imboni Co., Ltd
Thina nokugcizelela ukuqonda Ukucaciswa nezimfuneko izinga ikhasimende, isicelo ukulawula efanele futhi esikhiqiza ingxenye ngokuqondile okokuqala.
Izinga eliphezulu ngekhwalithi ibangelwa futhi inakekelwe ingqalasizinda yethu enamandla eyayihlanganisa zakamuva sokulinganisa zomculo ezifana emoyeni Izikali & nezinye wokulinganisa njalo wensimbi ulinganiswe ngokufanele. Abafakaza Izikali, Micrometer, Verniers njll izikhungo Ukuba ka CMM, iphrofayela umshini wokudlala amabhayisikobho zalapho test Special. Ukuzibophezela kwethu Quality Kuyaphawuleka ukuthi zonke yokukhiqiza contact kwenziwa Ruizheng Precision Machining esiqeqeshelwe-ISO 9001: 2000 With yokulinganisa zomculo eziphambili kakhulu futhi ingcweti elitheni ukunikeza amakhasimende yomhlaba ezilinganiselwa kahle, ezilinganiselwa umnotho, futhi eliphakeme imikhiqizo -quality.
Quality Control Izinyathelo
- Ubude ukuphathwa Quality (TQM)
- oluqhubekayo lokwenza ngcono
- Employee Training Izinhlelo
- Kuqondile Ukudidiyelwa Izinqubo
- Ukutshalwa kwezimali Best Quality Control Izinsiza kusebenza
- Quality Isisusa Izinhlelo
- Ukuzibophezela yenhlangano ukuba Quality
Kusukela Raw Material engenayo imikhiqizo kuthunyelwe, silawula yonke isinyathelo ngasinye senqubo yokukhiqiza ukuze ukuthathelwa umshuwalense imikhiqizo ezenziwa amaklayenti Ukucaciswa, Yonke imikhiqizo zidlule 4 amasheke kulo lonke loluhlelo:
Raw ukuhlolwa impahla
Ngo ngokucubungula wokuhlola
Waphikelela ngokuthi izinga kuyinto eza kuqala wethu wokuqala, kanye nokusentshenziswa kwe ISO9001: 2000, kwenziwe izilinganiso uhlelo lwethu izinga kanye nokusimama izinga efanelwe kithi nokwethenjwa ngamakhasimende ethu iminyaka. Ruizheng Precision Machining ingakusiza ukuthola eliphezulu kakhulu at the best intengo ezahlomula yokukhiqiza yakho ukuze China.